Ny fampiharana fampahatsiahivana 5 tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Ny finday Android dia manolotra asa maro ho antsika, ary mitombo ny lisitra rehefa mandeha ny fotoana. Iray amin'ireo fiasa maro ahafahantsika manao ny fampiasana ny fitaovana dia toy ny mpitantana andraikitra. Afaka mampiasa ny telefaona isika mba tsy hanadino na inona na inona. Araka izany, mitazona izay tsy maintsy ataontsika sy ny fandaharam-potoananay izahay. Mba hanatanterahana ireo karazana fiasa ireo dia mila fampiharana sahaza isika.
Soa ihany, manana fampiharana maro karazana an'ity karazana ity ho an'ny Android izahay. Miaraka amin'izany ao an-tsaina, avelanay ianao eto ambany miaraka amin'ny fampiharana fampahatsiahivana tsara indrindra. Araka izany dia mitazona ao an-tsaina foana ireo fanendrena sy fanoloran-tenantsika isika.
Ny zavatra tsara indrindra momba ireo rindranasa rehetra izay hasehonay anao manaraka ireo dia tena mora fandaharana izy ireo. Ka ny fampiasana azy dia tsy mitazona mistery. Araka izany dia hanampy be izy ireo hampahatsiahy anao ireo zavatra manan-danja indrindra.
2 Zavatra tokony hatao
4 D Fanamarihana
5 Fampatsiahivana Atlas
Iray amin'ireo safidy feno indrindra ao anatin'ireny karazana fampiharana ireny. Misongadina ambonin'izany rehetra izany izy famolavolana Material Design. Ho fanampin'izay, manana safidy manokana ho azy izahay. Afaka mamorona fampahatsiahivana isika amin'ny hetsika manokana na izay averimberina matetika. Amin'izany fomba izany no ananantsika a fanaraha-maso mazava tsara ny fandaharam-potoananay ary ny andro anio.
La maimaim-poana ny fampidinana ny app Android. Na dia mahita doka ao anatiny aza izahay.
Taskeet: fampatsiahivana, lisitry ny hatao, fanairana & mpikarakara
Iray amin'ireo safidy feno kokoa izay mety ho hitantsika anio. Misongadina amin'ny famolavolana azy tsotra, fa manolotra safidy maro ho antsika. Araka ny manana fampandrenesana isan-karazany izahay (na miteny aza), ho fanampin'ny gadget. Tokony holazaina ihany koa fa manolotra ampifanaraho amin'ny google. Ho fanampin'izany, mamela antsika hanova fampahatsiahivana ao anaty vondrona izy io. Manatanteraka tsara ny asany fa tsy manadino ireo asa isika.
La maimaim-poana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na eo aza izany dia mahita fividianana isika.
Developer: Fampivoarana fampiharana
Ity app ity dia mikarakara mamorona lisitry ny asa ahafahantsika miditra ao izay rehetra tokony hataontsika. Ho fanampin'izany, mamela antsika hiditra amin'ny fampahatsiahivana izay hivoaka tsindraindray. Ny zavatra tsara indrindra dia izany fampidirana kalandrie, zavatra manamora ny fifehezana ny zava-drehetra. Ka dia tena hita maso ary mora ny mahita ny fandaharam-potoananay sy ny asa izay efa miandry.
La maimaim-poana ny fampidinana ny app Android. Na izany aza, ao anaty no ahitantsika ny fividianana mba hahazoana asa fanampiny.
Mpitantana mamela antsika handamina sy hamorona fampahatsiahivana amin'ny fomba tsotra izy. Misongadina amin'ny famolavolana azy, tena hita maso ary miaraka amin'ny loko izay manamora ny fandaminana ny zava-drehetra. Noho izany, safidy mampahazo aina izy io. Ho fanampin'izay, izy io dia fampidirana amin'ny Google Now, widgets ary fanohanana TTS. Saingy, miaraka amin'ny safidy hafa koa toa ny mamoha ny naoty amin'ny alàlan'ny mpamaky ny dian-tànana.
La maimaim-poana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Ankoatr'izay, ao anatiny dia tsy misy fividianana na doka.
D Fanamarihana - Tsotra sy ara-pitaovana - naoty sy lisitra
Safidy tsara hafa handinihana izany miavaka amin'ny endriny tsotra sy tena milamina. Safidy tsara izany raha mitady zavatra tsotra ianao ary mamela anao hitantana tsara ny asa. Miseho milamina sy mazava foana ny zava-drehetra. Afaka mamorona asa sy mametraka hafatra fampitandremana isika mba hanatanterahana azy rehetra. Izy io angamba no tsotra indrindra amin'ny lisitra iray manontolo.
Antsika ity fifantenana miaraka amin'ireo fampiharana fampahatsiahivana tsara indrindra. Misongadina amin'ny fahalalahana izy rehetra ary mora ampiasaina ihany koa. Ka izy rehetra dia safidy tsara apetraka amin'ny fitaovana Android. Ny fahasamihafana lehibe dia mitoetra amin'ny fiasa fanampiny izay ampidirin'ny tsirairay amin'izy ireo. Ary koa ny endrika, satria mety misy iray izay mahazo aina kokoa ny endriny na tianao bebe kokoa. Ahoana ny hevitrao momba ny fisian'ireo fampiharana?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fampiharana Android tsara indrindra hamoronana fampahatsiahivana
Guerlen dia hoy izy:
Tsy haiko hoe iza amin'ireo rindranasa ireo no manome ahy ny fahafaha-manao, raha sanatria very finday na very fahatsiarovana na hafa, hahafahako miditra rehefa misintona ilay rindranasa indray. Izany hoe, amin'ny famerenana ny fampiharana raha voafafa izy io, dia afaka mamerina daty. Amin'ireto, iza amin'ireo no manana maodely izay isehoan'ny fampandrenesana amin'ny efijery iray manontolo? Izy io dia efa nanana traikefa tamin'ny omby fa ny antsasaky ny lahatsoratra fotsiny no navelako, na fampandrenesana.
Valiny tamin'i Guerlen
Ny lalao ady tsara indrindra ho an'ny Android
Ny Galaxy Note 8 sasany dia nanomboka nahazo ny kinova farany an'ny Android Oreo